कठै ! ३ वर्षीय छोराको पी’डा : पोहोर बुवालाई दा’गब’त्ती, यसपालि आमालाई दा’गब’त्ती - Seto News
Homeभिडियोकठै ! ३ वर्षीय छोराको पी’डा : पोहोर बुवालाई दा’गब’त्ती, यसपालि आमालाई...
कठै ! ३ वर्षीय छोराको पी’डा : पोहोर बुवालाई दा’गब’त्ती, यसपालि आमालाई दा’गब’त्ती
सप्तरी राजविराज–२ का ३ वर्षीय दिव्यंश साफी हजुरबुवा राजकुमारको काखमा आमा रुबीलाई दा’गब’त्ती दिने पर्खाइमा सप्तकोसी नदी किनार घाटमा गत सोमबार साँझ । सप्तरी राजविराज–२ का २ वर्षीय दिव्यंश साफीले काकाको काखमा बसेर बुवाको पार्थिव शरीरमा दा’गबत्ती दिएका थिए। गएको सोमबार घरमा बुवा राजन साफीको वार्षिक श्राद्ध चलिरहेको थियो । आमा रुबी साफीको अचानक शं’का’स्प-द मृ’त्यु भयो। ३ वर्षीय दिव्यंशले उही घाटमा पुगेर हजुरबुवाको काखमा बसी आमालाई पनि बिदा गरे ।
यही घाटमा उनले काकाको काखमा बसेर गत वर्ष बुवा राजन साफीलाई दा’गब’त्ती दिएका थिए। तस्बिर : मनोहर पोखरेल गत वर्ष कात्तिक २१ गते अन्नपूर्ण पोस्ट्ले प्रथम पृष्ठमा एउटा मा-र्मिक दु’खा-न्त समाचार छापेको थियो, ‘दाग ब त्तीले मनै पोल्यो । सप्तरीको हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिकास्थित सप्तकोसी नदी किनारमा सोमबार मध्यरात चकमन्न अ-न्धका-र छ । हजुरबुवाको काखमा लुपुक्क परेर बसेका दिव्यंश म-ला-मी-हरूको गतिविधि नियालिरहेका छन्।
एक वर्षकै अवधिमा बुवा र आमाको नि’धनपछि टु’हुरो भएका उनी घुरेर हेरिरहेका छन् । परिवारका सदस्य र मावली घरका आफन्तहरूले उनलाई सहारा दिने प्रयास गरिरहेका छन् । दिव्यंश भने आमाको साथ खोजिरहेका छन्। ‘ममी उ-ठनुस् न।।’ भनेर उ-ठाउने असफल प्र-यास गरिरहेका छन्।राजविराज–२ स्थित घरमा ७ वर्षीया छोरी दीक्षा आमालाई कहाँ लगेको भनेर खोजिरहेकी छिन् ।
शास्त्रअनुसार १६ संस्कारमध्ये अन्तिम संस्कारको तयारी भइरहेको छ। श्मशान घाटमा दाउराको चाङ लगाएर म-ला-मी-हरूले चिता बनाए । परिवारका सदस्यबाट चिता बनाउने जमिन किन्ने काम भयो । परिवारका सदस्यहरूले अर्थीबाट डोरी फुकाएर श-व-लाई चि’तामा सुताए । खरले छोपेर श’वका कपडाहरू ह’टाइयो । मृ’त’कका एक आफन्तले पाँचवटा कौडी र दाम राखे । मृ-तकलाई स्वर्गमा समेत शीतलता प्राप्त होस् भनेर मुखमा चन्दनको टुक्रा राखियो । दिव्यंशलाई यो सबै के भइरहेको छ भन्ने थाहा छैन ।
को भिड–१९ को कहरबीच नियमित फार्मेसी सञ्चालनमा खटिएका राजविराजस्थित गजेन्द्रनारायण सिंह अ’स्प-ताल-का फार्मेसी सहायक २८ वर्षीय राजन साफीको गत वर्ष कात्तिक १९ गते कोभि’डका कारण मृ’त्यु भएको थियो यता श्मशान घा’टमा ३ वर्षीय दिव्यंश आमालाई उठाउन खोज्दैछन् । चिता जलाउनु अघि नै अ’बोध बालकको निर्दोषप न हेरेर मलामी जानेहरूको मन भतभती पो’लेको हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिका–७ का सदानन्द रजकले बताए । चि ताको तयारीपछि से तो कपडा बेरेका साजनले भतिजा दिव्यंशलाई बोके । सोमबार उनको वार्षिक तिथिका दिन श्राद्धको कर्मका लागि घरमा तयारी भइरहेका बेला झु’ण्डि’एको अ वस्थामा राजनकी श्रीमती २४ वर्षीया रुबीसमेत मृ’त फे;ला परिन् । gorkhadaily